Zuckerberg ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများများအတွက် Wi-Fi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ် - သတင်း Rule
Zuckerberg ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများများအတွက် Wi-Fi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်
Facebook က CEO ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ဟာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကို အသုံးပြု. ဝေးလံခေါင်သီရပ်ရွာမှအင်တာနက်ကိုရောက်စေဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျောပွထားသညျ့ဖြစ်ပါတယ်.
မိမိအ non-profit internet.org အဖှဲ့အစညျး၏အောက်ရှိ, ဇူကာဘတ်ကိုသူနှင့်အတူပူးပေါင်းပြီထင်ရှား နာဆာ Ames မိုဃ်းတိမ်ကနေရောင်ခြည် Wi-Fi မှနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရှေ့ဆောင်သုတေသနစင်တာနှင့်ဗြိတိန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကုမ္ပဏီ Ascenta.
အဆိုပါအယူအဆမှာအသံသယရှိခေါင်းစဉ်အောက်မှာပူဖောင်းများမှတဆင့်အင်တာနက် access ကိုကယ်နှုတ်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီး Google ၏အကြံအစည်နှင့်အတူမျဉ်းပြိုင်ရှိပါတယ် “စီမံကိန်း Loon”.
ဒါဟာပြီးသား virtual reality နားကြပ်ကုမ္ပဏီ Oculus VR များအတွက် $ 2bn နှင့်အတူဆုတ်ပြီးနောက် Facebook ကသူဌေးကြီးတစ်ဦးအလုပ်များရက်သတ္တပတ်ခဲ့. အဆိုပါပြောင်းရွှေ့ကြေးသည်မိမိစိတ်ရင်းမေးမြန်းလူတွေနေတဲ့တန်ပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသူကလူတွေရဲ့ပါးစပ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအပြုသဘောအရသာထွက်ခွာတစ်ပတ်အဆုံးသတ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကြောင်းထင်ရပေသည်.
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Wi-Fi အစီအစဉ်၏ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းဘို့တထည့်သွင်းစဉ်းစားကုန်ကျလိမ့်မည်, နှင့် ရှက်ဖီးတက္ကသိုလ်မှ အင်ဂျင်နီယာများ 3D ပုံနှိပ်လေယာဉ်အတွက်အဖြေတွေ့ပြီစေခြင်းငှါ,.
အဆိုပါအဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသုတေသနစင်တာ (AMRC) ရှက်ဖီးတက္ကသိုလ်မှတစ်ဦး၏တစ်ဦး 1.5 ကျယ်ပြန့်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် မောင်းသူမဲ့ဝေဟင်မော်တော်ယာဉ် (မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်), 2kg အောက်မှာအလေးချိန်နှင့် thermoplastics မှဆောက်လုပ်ထား.
ပစ္စုပ္ပန်မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှသာတစ်ဦးဟေုနျစီးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့, သို့သော်နောက်ထပ် 3D ပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စျေးပေါအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများပေါင်းစပ်နှင့်အတူ, ထိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စျေးပေါဖြစ်နိုင်ပါတယ်, စစ်ဇုန်သို့ကျဆင်းနေများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစံပြ၏စွန့်ပစ်ခြင်းပုံစံကို, နျူကလီးယား hotzones နှင့်အခြားရောက်ရှိရန်ခဲယဉ်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ.
တနည်းအားဖြင့်၎င်း၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Wi-Fi ကွန်ရက်အတွက် internet.org ရဲ့မြတ်သောရည်မှန်းချက်ထွက်ကိုလှိမ့်တစ်ဦးစံပြလမ်းများအတွက်လုပ်နိုင်.
ဤဆောင်ပါး, Zuckerberg ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများများအတွက် Wi-Fi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
20621	1 Facebook က, Google က, Mark Zuckerberg ဟာ, ဝိုင်ဖိုင်
← Mavericks OS ကိုပြီးသားပေါ်မှာအပြေး 40 Apple က Macs ၏ရာခိုင်နှုန်းက မြောက်ကိုရီးယားအသစ်တစ်ခုနျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့မကတိပြု →